ဗီရာ နဲ့ ပှဲဟာ ဘာဖွဈလို့ အောငျလ အနျဆနျး ကို ကမ်ဘာကြျော သှားစနေိုငျတာလဲ? - SPORTS MYANMAR
ဗီရာ နဲ့ ပှဲဟာ ဘာဖွဈလို့ အောငျလ အနျဆနျး ကို ကမ်ဘာကြျော သှားစနေိုငျတာလဲ?
မနကျဖွနျ ညနရေောကျရငျတော့ ကနြျောတို့ တဈတှေ အားလုံး စောငျ့မြှျောနကွေတဲ့ One Championship ရဲ့ One Century ပှဲစဉျကွီးဟာ ဂပြနျ နိုငျငံမှာ စတငျကငျြးပတော့မှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီပှဲရဲ့ အဓိက ပှဲစဉျအဖွဈ ထိုးသတျမှာတော့ လိုကျဟဲဗီးဝိတျ နဲ့ မဈဒယျဝိတျတနျး နှဈခုစလုံး ရဲ့ ခနျြပီယံ ၊ မွနျမာ့ သူရဲကောငျးကွီး အောငျလ အနျဆနျး နဲ့ ဟဲဗီးဝိတျ ခနျြပီယံ ဖီလဈပိုငျ နိုငျငံသား ဘရနျဒနျ ဗီရာ တို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
တကယျတမျးမှာလဲ ဗီရာ နဲ့ ထိုးသတျမယျ့ ပှဲဟာ အောငျလ အတှကျ တဈခကျြခုတျပွီး ၊ အခကျြပေါငျးမြားစှာ ပွတျရှသှားနိုငျတဲ့ အခကျြအလကျတှေ မြားစှာရှိနတောမို့ ၊ ဒီပှဲမှာ ကနြျောတို့ သူရဲကောငျးကွီး ရဲ့ ဘကျကနေ အပွညျ့အ၀ ဝနျးရံလိုကျကွရအောငျပါ။
One Century ပှဲစဉျဟာ ကမ်ဘာ့ MMA လောက ရဲ့ အကွီးကယျြဆုံး နဲ့ အခမျးနားဆုံး ပှဲဖွဈပွီး ၊ UFC လို အဖှဲ့အစညျးမြိုးကတောငျ ကငျြးပ နိုငျခွငျး မရှိတဲ့ ပုံစံမြိုးတှေ ၊ အစီအစဉျတှနေဲ့ ကငျြးပသှားမှာ ဖွဈပါတယျ။ ဒီပွိုငျပှဲ တဈခုတညျးမှာပဲ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ ဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျကို ပိုငျဆိုငျဖူးတဲ့ ဖိုကျတာပေါငျး 28 ယောကျ အထိ ပါဝငျ ယှဉျပွိုငျ ထိုးသတျကွမှာပါ။ ဒါ့အပွငျ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံ လုပှဲကလဲ7ပှဲ အထိ ပါဝငျလြှကျ ရှိနပေါတယျ။
ဒါဟာ အရမျးကို ထူးခွားလှနျးတဲ့ အခကျြပွီး ၊ လကျရှိ MMA ရဲ့ အမွငျ့ဆုံး ပွိုငျပှဲလို့ ပွောလို့ရတဲ့ UFC တောငျ ပွိုငျပှဲ တဈခုမှ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံလုပှဲကို တဈပှဲသာ ထညျ့သှငျး ကငျြးပလရှေိ့တာ ဖွဈပါတယျ။
ဒီထကျ ထူးခွားတာက One Century ပှဲစဉျဟာ အခမျးနားဆုံး ပွိုငျပှဲ ဆိုတဲ့ ဂုဏျပုဒျနဲ့ အညီ ၊ အမရေိကားမှာလဲ B/R Live ကနေ ပထမဆုံး အကွိမျ ပွသသှားမှာ ဖွဈသလို ၊ ကမ်ဘာ့နိုငျငံ အသီးသီးမှာ တိုကျရိုတျထုတျလှငျ့ပွသမှုတှေ ပွုလုပျသှားမှာပါ။
ကွိုတငျ ခနျ့မှနျးတှကျခကျြမှုတှေ အရ ဒီပွိုငျပှဲကွီးကို တိုကျရိုတျကွညျ့ရှုကွမယျ့ ပရိသတျပေါငျး သနျး 70 အထိ ရှိလိမျ့မယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပွီး ၊ မွနျမာ နဲ့ ဖီလဈပိုငျ တို့က ပရိသတျတှေ အမြားဆုံး ပါဝငျလိမျ့မယျလို့ ဆိုပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ One Championship ဟာ UFC လို ပိုကျဆံပေးမှာ သူ့ရဲ့ပှဲစဉျတှကေို ကွညျ့ရှုခှငျ့ ရမယျ ဆိုတဲ့ မူဝါဒမြိုးကို တရားသေ စှဲကိုငျထားခွငျး မရှိတာကွောငျ့ ၊ ကမ်ဘာ့ခနျြပီယံလုပှဲ အဓိက ပှဲစဉျတှကေို အခမဲ့ ရုပျ/သံ လိုငျးတှကေနေ နိုငျငံတိုငျးစီမှာ ထုတျလှငျ့ပွသခှငျ့ ပေးဦးမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါ့ကွောငျ့ မွနျမာပွညျက ပရိသတျတှဟော မနကျပိုငျးမှာ MNTV နဲ့ ညနပေိုငျးမှာ MRTV Entertainment လိုငျးတှကေနေ အခမဲ့ ကွညျ့ရှုခှငျ့ ရရှိသှားမှာပါ။
အဲဒီလို အခကျြလကျတှကွေောငျ့ပဲ အောငျလ အနျဆနျး နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတျမယျ့ ပှဲစဉျဟာ တဈကမ်ဘာလုံးက ပရိသတျတှေ ကွညျ့ရှုကွမှာ ဖွဈလို ၊ ဒီပှဲမှာသာ ရလာဒျကောငျးခဲ့ရငျ အောငျလ အနျဆနျးဟာ ကမ်ဘာကြျော ဖိုကျတာ တဈယောကျ ဖွဈလာနိုငျသလို ၊ မွနျမာပွညျ ရဲ့ ပုံရိပျကိုလဲ တဈနညျးတဈဖုံ မွငျ့တငျနိုငျမှာ ဖွဈပါတယျ။
ဒါကွောငျ့လဲ One Championship ရဲ့ တညျထောငျသူ ခတျြထရီ က “ One Century ပှဲစဉျတှထေဲမှာ ကနြျော အကွိုကျဆုံး ပှဲက2ပှဲ ရှိပါတယျ။ တဈပှဲက အိနျဂလြီနာ တို့ ရဲ့ ပှဲဖွဈပွီး ၊ နောကျတဈပှဲ ကတော့ အောငျလ အနျဆနျး နဲ့ ဗီရာ တို့ရဲ့ ပှဲစဉျပါ။
ဒီနရောမှာ အောငျလနျ နဲ့ ဗီရာ တို့ပှဲဟာ ပိုကျဆံကွောငျ့ သျောလညျးကောငျး ၊ ကြျောဇောမှုကွောငျ့ သျောလညျးကောငျး ပျေါပေါကျလာခဲ့တာ မဟုတျဘူးဆိုတာ ကွိုပွီး ရှငျးလငျး ထားပါရစေ။
သူတို့ အတှကျလဲ ငှကွေေး က အဓိက မဟုတျပါဘူး။ ဒီဖိုကျတာ နှဈယောကျဟာ MMA သမိုငျးမှာ ဂန်တဝငျတှငျစမေယျ့ အခိုကျအတနျ့တှကေို ဖနျတီးဖို့ အခုလို ပှဲဖွဈလာခဲ့တာပါ” လို့ မှတျခကျြ ပေးသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒီတဈကွိမျ အောငျလ အနျဆနျးသာ အနိုငျရသှားမယျ ဆိုရငျတော့ သူဟာ လကျရှိ အာရှတိုကျ တဈခုလုံးရဲ့ အခမျးနားဆုံး MMA ဖိုကျတာ တဈယောကျလို့ ဝိုငျးဝနျး သတျမှတျပေးရတော့မှာ ဖွဈသလို ၊ ကခငျြပွညျကနေ ထှကျပျေါလာခဲ့တဲ့ မွနျမာပွညျရဲ့ နောကျထပျ အဖိုးတနျ ရတနာ တဈပါးလို့ ပွောငျးလဲ ချေါဝျေါကွရတော့မှာပါ။
အကောငျးဆုံး စှမျးဆောငျရညျတှေ နဲ့ အတူ ဆာမူရိုငျးတို့ ရဲ့မွမှော မွနျမာ့ အလံကို လှငျ့ထူခဲ့ပါ ကိုကွီးအောငျလရေ……….
ဗီရာ နဲ့ ပွဲဟာ ဘာဖြစ်လို့ အောင်လ အန်ဆန်း ကို ကမ္ဘာကျော် သွားစေနိုင်တာလဲ?
မနက်ဖြန် ညနေရောက်ရင်တော့ ကျနော်တို့ တစ်တွေ အားလုံး စောင့်မျှော်နေကြတဲ့ One Championship ရဲ့ One Century ပွဲစဉ်ကြီးဟာ ဂျပန် နိုင်ငံမှာ စတင်ကျင်းပတော့မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီပွဲရဲ့ အဓိက ပွဲစဉ်အဖြစ် ထိုးသတ်မှာတော့ လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် နဲ့ မစ်ဒယ်ဝိတ်တန်း နှစ်ခုစလုံး ရဲ့ ချန်ပီယံ ၊ မြန်မာ့ သူရဲကောင်းကြီး အောင်လ အန်ဆန်း နဲ့ ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ဖီလစ်ပိုင် နိုင်ငံသား ဘရန်ဒန် ဗီရာ တို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီရာ နဲ့ အောင်လ အန်ဆန်း တို့ နှစ်ယောက်စလုံးဟာ 2014 ခုနှစ်မှာ One Championship နဲ့ စတင်လက်တွဲခဲ့သူတွေ ဖြစ်ပြီး ၊ အောင်လ အန်ဆန်းက လက်ရှိ အချိန်ထိ စုစုပေါင်း 11 ပွဲအထိ ထိုးသတ်ထားကာ ၊ 10 ပွဲ နိုင် ၊ 1 ပွဲ ရှုံး ရလာဒ် ထွက်ပေါ်ထားခဲ့ပါတယ်။ ဗီရာကတော့4ပွဲသာ ထိုးသတ်ရသေးပြီး ၊4ပွဲ စလုံးကို အနိုင်ရရှိထားခဲ့တာပါ။
ပွဲမတိုင်မီ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ အင်တာဗျူးမှာတော့ ဗီရာဟာ ဒီပွဲဟာ4ချီအထိတောင် မရောက်ပဲ အဖြေပေါ်လိမ့်မယ်လို့ ဟောကိန်း ထုတ်သွားခဲ့ပြီး ၊ သူ့ရဲ့ လျှင်မြန်တဲ့ လက်သီးထိုးချက် တွဲလုံးတွေ နဲ့ ပြင်းထန်လွန်းတဲ့ ကန်ချက်တွေက အောင်လဆီက လိုက်ဟဲဗီးဝိတ် ချန်ပီယံ ရွှေခါးပတ်ကို လုယူဖို့ အဓိက ကျလိမ့်မယ်လို့ ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။
ဗီရာဟာ အမေရိကား နဲ့ ဥရောပ ပရိသတ်တွေ သိထားတဲ့ ဖိုက်တာ တစ်ယောက် ဖြစ်တာကြောင့် ၊ ဒီပွဲ ကနေ တဆင့် အောင်လ အန်ဆန်း ကလဲ သူ့ရဲ့ နာမည်ကို တစ်ကမ္ဘာလုံးက သိရှိသွားဖို့ မျှော်လင့်လျှက် ရှိနေပါတယ်။
တကယ်တမ်းမှာလဲ ဗီရာ နဲ့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲဟာ အောင်လ အတွက် တစ်ချက်ခုတ်ပြီး ၊ အချက်ပေါင်းများစွာ ပြတ်ရှသွားနိုင်တဲ့ အချက်အလက်တွေ များစွာရှိနေတာမို့ ၊ ဒီပွဲမှာ ကျနော်တို့ သူရဲကောင်းကြီး ရဲ့ ဘက်ကနေ အပြည့်အ၀ ဝန်းရံလိုက်ကြရအောင်ပါ။
One Century ပွဲစဉ်ဟာ ကမ္ဘာ့ MMA လောက ရဲ့ အကြီးကျယ်ဆုံး နဲ့ အခမ်းနားဆုံး ပွဲဖြစ်ပြီး ၊ UFC လို အဖွဲ့အစည်းမျိုးကတောင် ကျင်းပ နိုင်ခြင်း မရှိတဲ့ ပုံစံမျိုးတွေ ၊ အစီအစဉ်တွေနဲ့ ကျင်းပသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပြိုင်ပွဲ တစ်ခုတည်းမှာပဲ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်ကို ပိုင်ဆိုင်ဖူးတဲ့ ဖိုက်တာပေါင်း 28 ယောက် အထိ ပါဝင် ယှဉ်ပြိုင် ထိုးသတ်ကြမှာပါ။ ဒါ့အပြင် ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံ လုပွဲကလဲ7ပွဲ အထိ ပါဝင်လျှက် ရှိနေပါတယ်။
ဒါဟာ အရမ်းကို ထူးခြားလွန်းတဲ့ အချက်ပြီး ၊ လက်ရှိ MMA ရဲ့ အမြင့်ဆုံး ပြိုင်ပွဲလို့ ပြောလို့ရတဲ့ UFC တောင် ပြိုင်ပွဲ တစ်ခုမှ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလုပွဲကို တစ်ပွဲသာ ထည့်သွင်း ကျင်းပလေ့ရှိတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီထက် ထူးခြားတာက One Century ပွဲစဉ်ဟာ အခမ်းနားဆုံး ပြိုင်ပွဲ ဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ်နဲ့ အညီ ၊ အမေရိကားမှာလဲ B/R Live ကနေ ပထမဆုံး အကြိမ် ပြသသွားမှာ ဖြစ်သလို ၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးမှာ တိုက်ရိုတ်ထုတ်လွှင့်ပြသမှုတွေ ပြုလုပ်သွားမှာပါ။
ကြိုတင် ခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတွေ အရ ဒီပြိုင်ပွဲကြီးကို တိုက်ရိုတ်ကြည့်ရှုကြမယ့် ပရိသတ်ပေါင်း သန်း 70 အထိ ရှိလိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပြီး ၊ မြန်မာ နဲ့ ဖီလစ်ပိုင် တို့က ပရိသတ်တွေ အများဆုံး ပါဝင်လိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါ့အပြင် One Championship ဟာ UFC လို ပိုက်ဆံပေးမှာ သူ့ရဲ့ပွဲစဉ်တွေကို ကြည့်ရှုခွင့် ရမယ် ဆိုတဲ့ မူဝါဒမျိုးကို တရားသေ စွဲကိုင်ထားခြင်း မရှိတာကြောင့် ၊ ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံလုပွဲ အဓိက ပွဲစဉ်တွေကို အခမဲ့ ရုပ်/သံ လိုင်းတွေကနေ နိုင်ငံတိုင်းစီမှာ ထုတ်လွင့်ပြသခွင့် ပေးဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် မြန်မာပြည်က ပရိသတ်တွေဟာ မနက်ပိုင်းမှာ MNTV နဲ့ ညနေပိုင်းမှာ MRTV Entertainment လိုင်းတွေကနေ အခမဲ့ ကြည့်ရှုခွင့် ရရှိသွားမှာပါ။
အဲဒီလို အချက်လက်တွေကြောင့်ပဲ အောင်လ အန်ဆန်း နဲ့ ဗီရာ တို့ ထိုးသတ်မယ့် ပွဲစဉ်ဟာ တစ်ကမ္ဘာလုံးက ပရိသတ်တွေ ကြည့်ရှုကြမှာ ဖြစ်လို ၊ ဒီပွဲမှာသာ ရလာဒ်ကောင်းခဲ့ရင် အောင်လ အန်ဆန်းဟာ ကမ္ဘာကျော် ဖိုက်တာ တစ်ယောက် ဖြစ်လာနိုင်သလို ၊ မြန်မာပြည် ရဲ့ ပုံရိပ်ကိုလဲ တစ်နည်းတစ်ဖုံ မြင့်တင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့်လဲ One Championship ရဲ့ တည်ထောင်သူ ချတ်ထရီ က “ One Century ပွဲစဉ်တွေထဲမှာ ကျနော် အကြိုက်ဆုံး ပွဲက2ပွဲ ရှိပါတယ်။ တစ်ပွဲက အိန်ဂျလီနာ တို့ ရဲ့ ပွဲဖြစ်ပြီး ၊ နောက်တစ်ပွဲ ကတော့ အောင်လ အန်ဆန်း နဲ့ ဗီရာ တို့ရဲ့ ပွဲစဉ်ပါ။
ဒီနေရာမှာ အောင်လန် နဲ့ ဗီရာ တို့ပွဲဟာ ပိုက်ဆံကြောင့် သော်လည်းကောင်း ၊ ကျော်ဇောမှုကြောင့် သော်လည်းကောင်း ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာ မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ကြိုပြီး ရှင်းလင်း ထားပါရစေ။
သူတို့ အတွက်လဲ ငွေကြေး က အဓိက မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီဖိုက်တာ နှစ်ယောက်ဟာ MMA သမိုင်းမှာ ဂန္တဝင်တွင်စေမယ့် အခိုက်အတန့်တွေကို ဖန်တီးဖို့ အခုလို ပွဲဖြစ်လာခဲ့တာပါ” လို့ မှတ်ချက် ပေးသွားခဲ့ပါတယ်။
ဒီတစ်ကြိမ် အောင်လ အန်ဆန်းသာ အနိုင်ရသွားမယ် ဆိုရင်တော့ သူဟာ လက်ရှိ အာရှတိုက် တစ်ခုလုံးရဲ့ အခမ်းနားဆုံး MMA ဖိုက်တာ တစ်ယောက်လို့ ဝိုင်းဝန်း သတ်မှတ်ပေးရတော့မှာ ဖြစ်သလို ၊ ကချင်ပြည်ကနေ ထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ နောက်ထပ် အဖိုးတန် ရတနာ တစ်ပါးလို့ ပြောင်းလဲ ခေါ်ဝေါ်ကြရတော့မှာပါ။
အကောင်းဆုံး စွမ်းဆောင်ရည်တွေ နဲ့ အတူ ဆာမူရိုင်းတို့ ရဲ့မြေမှာ မြန်မာ့ အလံကို လွှင့်ထူခဲ့ပါ ကိုကြီးအောင်လရေ……….